I-8x31 Podcast: I-Galaxy S8 kunye neengxaki zayo | Ndisuka mac
8 × 31 podcast: I-Galaxy S8 kunye neengxaki zayo
Ngenye iveki, iActualidad iPhone y Soy de Mac Iqela lidibene ukurekhoda isiqendu esitsha seTodo Apple Podcast, ipodcast efumaneka kwiTunes nakuYouTube, apho ungonwabela khona ipodcast, usibuza imibuzo okanye uphawule izihloko esithethe ngazo ngelo xesha. Le veki ibiyinqena kancinci ngokweendaba, kodwa nangoku sizamile ukuqokelela ezona ndaba zibalulekileyo ezinxulumene ne-iPhone, i-iPad, iMac kunye neendaba ngokubanzi ezingqonge inkampani kule veki.
Kwiintsuku ezimbalwa, abokuqala abanethamsanqa abafumene i-Galaxy S8, baqala ukubonisa iingxaki zokuqala zokusebenza, njengoko kusenzeka kwizixhobo zokuqala zabo bonke abavelisi abafikelela kwintengiso kuqala. Isikrini esibomvu esinefayile ye- Umbala obomvu kancinci, imiba yokutshaja ngaphandle kwamacingo, imiba yoqhagamshelo lweWifi… Kucacile ukuba ayingabo bonke abasebenzisi abaneengxaki, kodwa okwangoku le ngxaki ichaphazela inani elincinci labathengi abathenga esi sixhobo. Isamsung sele ivakalisile ukuba ezi ngxaki zokuqala ziya kusonjululwa ngohlaziyo, njengoko bonke abenzi behlala benza.
Njengoko benditshilo ekuqaleni kweli nqaku, ukuba ufuna ukulandela zonke iziqendu zeli xesha lesibhozo, kufuneka Rhuma kwisitishi sethu seTunes. Kodwa ukuba, ngokuchaseneyo, ukhetha iYouTube kune ukonwabele ipodcast nganye, kufuneka ume nje umjelo wethu kwaye ubhalise, ukuze ngalo lonke ixesha ividiyo yakutshanje ifumaneke, uya kufumana isaziso ngeakhawunti yakho ye-imeyile okanye ngesicelo seYouTube.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » 8 × 31 podcast: I-Galaxy S8 kunye neengxaki zayo